Emereme "Afo Otuto", Oge ndi Igbo nke Francis Nwaoha siri Voice of Nigeria wetere anyi.
Mbediọgụ hụrụ mụ tata na-akọsara mụ ihe ya hụrụ na-agbagwoju ya anya. Mbediọgụ sị na ya hụ ụmụ mmadụ na anụ ọhịa ka ha na-agba ọsọ ka a gasị na ha anaghị anwụ anwụ, ka ha na ezu ike, ya ajụa onwe ya sị ọ bụ gịnị na bụ nsogbu ha?
Ndị omebe iwu nke ala Nigeria eweputego akwụkwọ iwu ọhụrụ, nke megidere itụ mgbere mmadụ. Ndị otu Nigerian Federal Executive Council enyego nnakwe ha, sị na onye ọ bụna e jidoro ebe ọ na-ada iwu ọhụrụ a megidere ire ma ọ bụ ịzụ mmadụ n’ụdị ọ bụna, ga-aga mkpọrọ afọ asaa.
Ka ndị otu a nwechara nzụkọ ha n’Abuja, n’ụbọchị Nwenezdee, onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi, Mazị Labaran Maku, kwuru nke a na bekee:
“the Attorney-General of the Federation and Minister of Justice, Mohammed Bello Adoke, tabled a memorandum before the Council to seek approval for the Trafficking in Persons (Prohibition), Enforcement and Administration Bill, 2012.”
Mazị Maku kwuru n’ala Nigeria nweburu iwu megidere ịtụ mgbere mmadụ, mana iwu a nwere ebe ole n’ole o riri mperi. Ihe a na-ame ugbu a bụ ime ka iwu a kwụdosie ike. Ha anabatago mkpọrọ afọ asaa maka onye ọ bụna dara iwu a.
Mazị Maku gbakwụnyere na a ga-enyefe akwụkwọ iwu a n’aka ndị ụlọ omebe iwu na nso a, maka ime ka ọ diwazie ire dịka iwu na-achị ala Nigeria.